Isagu wuu i jecel yahay, Kaniisada Adduunka ee Switzerland (WKG)
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaan awoodey inaan daahfuri muuqaal cajiib ah, farxad leh: "Ilaah waa i jecel yahay"! Waxaa laga yabaa inaadan ku helin daahfurka xiisaha badan. Laakiin ka dib markii aan Ilaahay muddo sannado ah xaakin adag ahaa oo sugi jiray inuu i ciqaabo haddii aan wax ka ogaado, waxay ii tahay run cusub.
Xiriirkeyga aan la leeyahay Ilaah - haddii aad ugu yeeri lahayd cilaaqaad - wuxuu bilaabmay markii aan gabar yari ahay. Waxaan xasuustaa akhrinta Kitaabka Quduuska ah oo waxaan dareemay wax xoogaa xiriir ah oo ka dhexeeya dabeecadan cajaa'ibka leh, ee ka sarreysa Waxaan doonayay inaan u caabudayo si uun, laakiin ma aan garanayn sida.
Khibradeyda cibaadada gebi ahaanba igama aysan qancin, in kastoo aan jeclaa inaan gabyi jiray oo aan kaqeybgalay kooxda heesta in muddo ah. Mar waxaan ka qeyb galay maktabadda kutubta-nasashada ee asxaabta. Markuu usbuucii dhammaaday waxaan qolka u galay macallin ka mid ah macallimiinta. Wuxuu igala hadlay baahida loo qabo in la aqbalo Masiixa badbaadiyahayga. Aniga fikirkeyga gudaha ayaa doonayey inuu sameeyo, laakiin waxaan ku qanacsanahay aaminaad badan waxaana dareemay inay tahay wax aan jeclahay. Wali ma aanan aqoonin cidda uu ahaa Allah ama sida loola xiriiro isaga. Markii dambena waxaan ogaaday in Eebbe sharci dejiye iyo xaakin ka yahay kaniisad ku saleysan sharciga. Hadaanan addeecin dhamaan sharciyadiisa, waan ogahay inay dhibaato weyn igu dhexjirto.
Markaasaan maqlay khudbad wax walba beddeley. Wadaadku wuxuu ka hadlay Ilaah inuu yaqaan waxkasta oo ku saabsan dumarka maxaa yeelay isagaa na abuuray. Sidee buu noo abuuri lahaa hadduusan lahayn tayadaas iyo astaamahaas? Dabcan, tani sidoo kale waxay khusaysaa ragga. Tan iyo markii Ilaah igu sameeyay "nin" aragtidaas oo kale, waxaan u qaatay inuu ragga ka dhigay sidii ay ahayd iyo in haweenku si uun uga duwan yihiin. Qoraalkan keliya - waana kan keliya ee aan ka xasuusto khudbadda - indhahayga ayaan u furay si aan u arko abuure garanaya oo i garanaya. Ka sii muhiimsan, yaa i jecel. Isagu wuu i jecel yahay maalmahayga xun, iyo maalmahaygii wanaagsanaa iyo xitaa markii cid kale aysan u muuqan inay aniga i jecel yihiin. Jacaylkan lama barbar dhigi karo nooc kasta oo kale oo jacayl ah oo aan waligey yaqaan. Waan ogahay in aabahay aad ii jeclaa markii uu noolaa. Hooyaday way i jecel tahay, laakiin waa inay la tacaashaa runnimada ku noolaanshaha sidii carmal oo kale hadda. Waan ogahay inuu ninkaygu i jecelyahay, inuu yahay qof aniga oo kale ah oo uuna Eebbe ugu talagalin inuu la kulmo baahi kasta. Waan ogahay in carruurtaydu ay i jecel yihiin, laakiin wey koraan kadibna wey ka guuraan waxaanan ka mid noqon doonaa kuwa iyaga ugu yeeri doona usbuucii hal mar una imaan doona booqashooyinka ciidaha.
Kaliya Eebbe wuxuu igu jecel yahay shuruud la’aan, dulqaad la’aan, dulqaad la’aan, xadidnaan, qulqulid, aad isugu dhow, oo aad u cajiib badan, kalgacal iyo kalgacal badan! Jacaylka Ilaah waa mid la yaab leh, waa mid ku filan adduunka oo dhan (Yooxanaa 3,16) sidoo kale si toos ah ayay ii khusaysaa aniga. Waa jacayl kaas oo aan ku noqon karo cidda aan ahay. Waxaan aaminsanahay kalgacalkan oo nafteyda u qanci karaa in la ii beddelo Waa jacayl nolosha i siiya. Waa jacayl kii Ciise u dhintay.
Haddii aad weli u aragto Ilaah sidii aan ku sameeyay, ka fikir hal shay oo ah: "Ilaah runti wuu ku jecel yahay"! Aqoontaani adiga ayaa qaabayn doona.